ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်မျှလိင်သင်တစ်ဦး Better Life Live ကိုကူညီပါနိုင်သလား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 02 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ငါတို့ရှိသမျှသည်လိင်ခံစားနိုင်ပဲဘယ်လောက်ကောင်းသိသင်မူကား, လိင်, သင်တို့အဘို့တကယ်တော့ကျန်းမာတဲ့ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါ?
လိင်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေ. မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံရှိသည်တဲ့သူတွေကတကယ်တော့ပိုးမွှားများဆန့်ကျင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံကာကွယ်ကြောင်းပဋိပမာဏမြင့်မားစွာရှိသည်, ဗိုင်းရပ်စ်များ, နှင့်အခြားကျူးကျော်လာသူတွေက. ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တက်ကြွစွာနေထိုင်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုပါသည်ဖြစ်ပါတယ်, ကျန်းမာသောအစာကိုစား, နှင့်သေချာသင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပျော်ရွှင်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်စေဖို့လုံလောက်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းရ.
လိင် Boost လိင်စိတ်. လိင်ကပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်မသာပေမယ့်သင့်ရဲ့လိင်စိတ်တိုးတက်စေလိမ့်မည်ရှိခြင်း. မိန်းမတို့သည်, လိင်တိုးမိန်းမအင်္ဂါဇာတ်ချောဆီအရည်ကြည်ရှိခြင်း, သွေးစီးဆင်းမှု, နှင့် elasticity, အားလုံးတစ်ဦးပိုမိုပြင်းထန်လာသည်တပ်မက်ဖန်တီးနေစဉ်လိင်ပိုကောင်းခံစားရအောင်.
လိင်သွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ. လိင်နှင့်အနိမ့်သွေးဖိအားအကြား link တစ်ခုရှိကြောင်းအကြံပြုကြောင်းသုတေသနပြုမှုရှိပါတယ်. လိင်စသင်၏နှလုံးတိုက်ခိုက်စွန့်စားမှုစေတယ်လေ. သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစောင့်မျှော်နေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအပြင်, လိင်စခွင် estrogen ဟော်မုန်း testosterone နဲ့အဆင့်ဆင့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေ.
လိင်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်မှတ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပုံမှန် cardio လေ့ကျင့်ခန်းကိုအစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါနေစဉ်, ကကျိန်းသေအထောက်အကူပြု. ပုံမှန်အားဖြင့်, လိင်သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတက် bumping နှင့်အမျိုးမျိုးသောကြွက်သားများကို အသုံးပြု. အပြင်တစ်မိနစ်ကိုငါးကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း.
လိင်နာကျင်မှုကိုလျော့ကျစေရေးနိုင်. သင်က Migraine သို့မဟုတ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝေဒနာအပြင်းအထန်ကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အစားအ Aspirin ကသိမ်းပိုက်မှုများ၏, တစ်အော်ဂဇင်ကြိုးစား. တစ်အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်း, ဟော်မုန်းသင့်နာကျင်မှုကိုသည်းခံမှုမြှင့်ကူညီဖြန့်ချိသည်. နာကျင်မှုကိုလျှော့ချပေးသည့်အော်ဂဇင်မပါဘဲတောင်မှဆွကူညီပေးနိုင်တယ်.
လိင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမှာယောက်ျားရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလျှော့ချနိုင်ပါသည်. ထို American Medical Association ဂျာနယ်ပြုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုယောက်ျားမကြာခဏ ejaculated သူကဤသို့ဆို၏ (အနည်းဆုံး 21 အဆတလ) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရနည်းပါးသွား.
လိင်အအိပ်ကို improve. ပြည်သူ့လိင်ပြီးနောက်အလျင်အမြန်အိပ်ပျော်လေ့, အထူးသဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အော်ဂဇင်ရှိ၏. တစ်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်, ဟော်မုန်း prolactin အိပ်နှင့်အပန်းဖြေ၏ခံစားချက်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည့်ဖြန့်ချိသည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လိင်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ပါးသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်. အနီးကပ်ဖြစ်ခြင်း, ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သက်သာရုံသက်သာနိုင်မှ, ဆင်းရဲငြိုငြင်သောအခါ, နှင့်အနိမ့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု. မထိစိပါအောင်ဖက်သဘာဝလွှတ်ပေးရန်နိုင် “ခံစားကောင်းဟော်မုန်း” လိင်စိတ်ဦးနှောက်ဓာတုပြန်လွှတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်အပျော်အပါးနှင့်ဆုလာဘ် system ကိုတက် AMPS နေစဉ်. လိင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနွေးထွေးမှုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်.